လေနုအေး: သားလေးမွေးနေ့ ကုသိုလ်
စသိကတည်းက transformer ကားပုံကိတ်..ဒီနှစ်တော့ နောက်တမျိုး...ပျော်ရွှင်ကျန်းမာလိုရာပြည့်ပါစေ ...
Mg Zanaka said...
သားငယ်လေးရဲ့ ပျော်စရာမွေးနေ့ဟာ မင်္ဂလာရှိသောမွေးနေ့လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ.... သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ပါသည်ခင်ဗျာ... သာဓု...သာဓု...သာဓု....
မတန်ခူးရယ်..အဲဒီလိုကုသိုလ်ယူရမှန်းမသိဘူးတော့...။ ဆုမြတ်လည်းနောက်ကျရင်အဲလိုမျိူးလေးကုသိုလ်ယူပါဦးမယ်..။ သုတလေးအတွက် belated birthday wish လေးပါ ။ မွေးနေ့တိုင်းမွေးနေ့တိုင်းကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကျန်းကျန်းမာမာဖြတ်သန်းနိုင်ပြီး မိဘပတ်ဝန်းကျင်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သားကောင်းရတနာလေးဖြစ်ပါစေး) ။
သားလေးအတွက် အစစ ပြည့်စုံပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေလို့ အန်တီသက်ဝေကလည်း ဆုတောင်းတယ်လို့ ပြောပေးပါနော်... သားက ကြီးလာလေ တန်ခူးနဲ့ တူလာလေပဲ... <3
အမ တန်ခူးရေ၊ တခြား ဘယ်နေရာတွေမှာ ငါးလွှတ်လို့ရသေးလဲဟင် ? မဆုမြတ်လိုပဲ ဒီလို သတ်ခံရခါနီး ငါးလေးတွေ ဝယ်ပြီး ကုသိုလ်ယူလို့ရမှန်း ခုမှသိတယ်။
Where did you order the cake? I want to order for my son's bd.
May I know where can I order Minion cake?
Please Pass my belated birthday wish to Thuta.
Are they freshwater fish or saltwater fish?
Please pass my belated birthday wishes to Thuta.
Are they saltwater fishes or freshwater fishes?
ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ ဘလော့တွေဘက် ခြေဦးမလှည့်ဖြစ်တာ ကြာသွားတာနဲ့ သားသားမွေးနေ့တောင် မသိလိုက်ဘူး။
သားသားက minions လေးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်နော်။ :)
သားသားလေး လိမ်မာရေးခြားရှိပြီး အမျိုး ဘာသာ သာသနာအကျိုး သယ်ပိုးနိုင်တဲ့ သားကလေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
မျက်မှန်ကလေးနဲ့ ခလေးလူကြီးလေးလိုပဲး)))
ဟိုအကျီ င်္လေးတောင်ဝတ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး ဘန်ကောက်လူကြုံရှိပြောအုံးးး အစ်မ ။
Hay Mann Tha Zin said...
မအားလို့ ဘယ်မှမရောက်ဖြစ်တာကြာပေါ့။ ဒီနေ့ မှ ညီမလေး ဘလော့ဆီ ရောက်လာမှ သားလေးမွေးနေ့ပိုစ်လေးဖတ်လိုက်ရတယ်။ မွေးနေ့ မှာ လူဒါန်းတဲ့ကုသိုလ်လေး ကို ဖတ်လိုက်ရတာ အရမ်းကို စိတ်ချမ်းမြေ့ ရပါတယ်။
သားလေး အတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာကို စိတ်ချမ်းသာစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ..